अर्चना पनेरुले भेटेकी हुन् त लाईफ पार्टनर, कि यो पनि चर्चामा आउने शैली ? - Purbeli News
प्रकाशित मिति: सोमबार, फाल्गुण ०७, २०७४ समय: २१:३४:५०
इटहरी/ केही समय अघि सामाजिक संजालमा आफ्नो अश्लील भिडियोहरु सार्बजनिक गर्दै आफू पोर्न स्टार बन्ने अभिव्यक्ति दिदै आएकी अर्चना पनेरुको बिबाह भएको तस्बिर सार्बजनिक भएको छ । पछिल्लो समय यस्ता हर्कत बन्द गरेपनी बेलाबेला उनको खबरहरु बाहिरिरहेका हुन्छन् । त्यो समय अर्चनाले यस्ता हर्कत गरेपछि आफू पढिरहेको स्कुलबाट निष्कासन देखि गाउबाटै अपहेलित हुनु परेको थियो ।
तर आफ्नो हर्कतलाई विश्राम दिइनन् । यता फिल्म क्षेत्रका केही निर्माता निर्देशक पनि त्यसबेला अर्चनालाई आफ्नो फिल्ममा लिन लाईन लागे । आफ्नो फिल्ममा मुख्य नायिका पनि बनाए, तर फिल्म हेर्न जाने सिमित दर्शकहरु मुख छोप्दै हल छिरेर निस्किए । निर्माताको लाखौ लगानी चुर्लुम्मै भयो । पछिल्लो समय अर्चनाको फिल्म लाईनमा नाम निशान छैन । तर काठमाण्डौको एक डान्स बारमा नाच्ने गर्छिन भन्ने खबर बाहिरिएको छ ।
मिडियाबाट ओझेल परेकी उनले सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत एक अमेरिकन नागरिक संग बिबाह बन्धनमा बाँधिएको बताएकी छन् । फेसबुकमा बिवाहको पहिरन सहतिको फोटो सार्वजनिक गर्दै उनले लेखेकि छन् “गट म्यारिड, लक्की टु गट अ लाईफ पार्टनर लाइक यु” भनेर लेखेकी छिन् । यो उनको चर्चामा आउने शैलि हो या रियल हो ? त्यो भने खुलेको छैन ।